Villa Leon - I-Airbnb
Loukissia, Thessalia Sterea Ellada, Greece
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgios
Xa uchaza indawo eyonwabisayo neyonwabisayo yokuchitha iiholide zakho, kulapha apho unokufumana khona i-ambience efanelekileyo kunye namava.
I-villa yangoku, ixhotyiswe ngazo zonke izinto eziluncedo zale mihla kunye nobutofotofo. Ijikelezwe lulwandle oluluhlaza kunye negadi eluhlaza. Ilungele ukuphumla kunye namaxesha angasese.I-villa enemigangatho emithathu, embindini wendawo ye-4,000 s.m., ene-pool enkulu. Iimbono ezingathinteliyo, abanini abanobubele.
ILeon Villa yenye yeevillas ezimbini ezizolileyo zepropathi, kwiphondo lase-Evia, kufutshane neChalkida yaseGrisi. Ibekwe phakathi kwe-4.000m2 yeegadi ezintle zeMeditera, iLeon Villa ibonelela ngobutofotofo, ngendawo yokuhlala yabucala ye-VIP, usapho okanye iiholide zeshishini.
Igaraji yokupaka simahla enophahla eseyadini – ineendawo eziyi-10
Isetyenziswa nangabanye phandle amanzi anetyuwa ipuli ende
4.60 · Izimvo eziyi-20
Indawo ethule kakhulu, izindlu zeeholide, iikhilomitha ezili-15 ukusuka kwidolophu yaseHalkis.
I-Leon Villa ibekwe ngokufanelekileyo kuhambo lwemihla ngemihla - phakathi kwezinye - ukuya eSt. John the Russian Church (50 km), i-Evian Lake (90 km), i-Ancient Delphi (130 km) kunye ne-Edipsos Natural Spa (110 km).
* Ulwandle lwaseSaint Minas (iikhilomitha ezi-6 ukusuka eChalkida)
* Ulwandle lwaseAlykes (iikhilomitha ezi-6 ukusuka eChalkida)
* Ulwandle lwaseSanta Anna e-Evia Island (iikhilomitha ezingama-75 ukusuka eChalkida)
* IiRovies elunxwemeni kuMantla Evia (iikhilomitha ezingama-75 ukusuka eChalkida)
* Ulwandle lwaseChiliadou e-Evia Island (iikhilomitha ezingama-95 ukusuka eChalkida)
UYohane weCawa yaseRashiya
Ithiyetha yaMandulo yase-Eretria
Indawo yeArtemision Archaeological Area
I-Archaeological Museum yase-Eretria
Itempile yaMandulo kaYohane oNgcwele waseRashiya
Izindlu zeDragon kwiNtaba iDirfi (South Evia)
I-Edipsos Spa (iibhafu zendalo ezinyangayo)
Ibhulorho endala ye-Euripus Channel
IHolo yeDolophu (eyakhiwa ngo-1906, nguKamaras)
I-Red House (yakhiwa ngo-1884, nguFleggas)
Indlu eneMifanekiso eqingqiweyo (eyakhiwa ngo-1801, lusapho lwakwaMalliou)
Imyuziyam ye-Archaeological Museum
Itempile yaseSt. Paraskevi, umxhasi wesixeko saseChalkida (i-imeyile efihliweyo); Itempile yaseTurkey ka-Emir Zade
Indlu yeNkundla (eyakhiwa ngo-1909, nguKamaras)
Ngemoto: 90' nje ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseAthens, eGrisi.
Ngololiwe: Athens - Chalkida (ubude: 85')
Isikhululo sikaloliwe saseChalkida (2 'ukuhamba ukusuka kwibhulorho endala) sisikhululo esihle ecaleni kwendlela kaloliwe yamaGrike.
Ngebhasi: Athens - Chalkida (ubude: 70')
Iibhasi zemihla ngemihla rhoqo ngesiqingatha seyure
Isikhululo sebhasi eAthens (Itheminali B): 260, Liosion Str.
Umbuki zindwendwe ngu- Georgios
Cebisa ngazo naziphi na izibonelelo ezongezelelweyo onokuthi uzifune. Ingcebiso kuyo nayiphi na imisebenzi yangaphandle, njengemidlalo, ukuntywila emanzini, iihambo.
Umnxeba kude kuyo nayiphi na imfuno onokuba unayo.
Inombolo yomthetho: 00000483595
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Loukissia